Ra'iisul Wasaare Khayre oo Maanta Booqasho Kedis ah ku Tegay Labo Wasaaradood (SAWIRRO)
Ra’iisal Wasaaraha dalka Soomaaliya mudane, Xasan Cali Kheyra ayaa maanta booqasho kedis ah waxa uu ku tagay xarunta Wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul Insaanka ee Xukuumadda Soomaaliya, xilli hawlaha shaqada Wasaaradda ay si caadi ah ku socdeen.
Kormeerkaan kadiska ah ee Ra’iisal Wasaaraha uu ku tagay xarunta Wasaaradda ayaa qayb ka ah kormeero kala duwan uu ku tagaayo Ra’iisal Wasaaraha xarumaha Wasaaraddaha dowladda.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa tagay xarunta Wasaaradda Haweenka 08:40 daqiiqo ee subaxnimo, waxaana xilligaasi Wasaaradda si caadi ah uga socday shaqada maalinlaha ah ee shaqaalaha ay qabtaan.
Agaasimaha Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Soomaaliya Dr. Omar Abdi Qani ayaa ku soo dhaweeyay Ra’iisal Wasaaraha xarunta Wasaaradda, wuxuuna warbixin ka siiyay sida ay u socoto shaqada Wasaaradda.
Intii uu ku guda jiray kormeerkan howleed, ayuu Ra’iisal Wasaare Kheyre tagay xafiisyada Wasaaradda Warfaafinta iyo Hannuuninta Dadweynaha, isaga oo xafiiskiisa ugu galay Wasiirka Warfaafinta Ing. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), oo xilligaasi ku jiray howlihiisa shaqo, waxaana uu si guud u kormeeray qeybaha kale ee xafiisyada Wasaaradda.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa wada dar-dargelinta shaqada wasaaradaha, waxana uu doonayaa inuu ogaado Wasaaradaha shaqeeya ee dhaqan geliyay xilliga shaqo soo galista oo ah 8:00 Subaxnimo iyo kuwa aanan dhaqan geli intaba.